Aagaga kicinta dareenka jidhka | Zanzu
Galmo ahaan meelaha xasaasiga ah ee jidhka. Haddii meelahan ahy kacaan, waaxaad kartaa inaad kacsato. Maaha keliya xubanaha galamda iyo aaga kuw areegsan iyadaha ee xasaasiga ah, laakiin sidoo kale, dhegaha, ibta, rays ma gaadhada cagta, gacmaha, afka, iwm. aagaga kicinta dareenka jidhka way kala duwan yihiin qof kasta.
Aaga cowradu ku taal
In la xiiseeyo
Wareega ibta hoosteeda